Ebisu and Daikoku - onkulunkulu benhlanhla nenjabulo ku-feng shui
I-Ebisu ne-Daikoku bangonkulunkulu benhlanhla nenjabulo kufilosofi kaFeng Shui. Njengomthetho, baboniswa ndawonye. Naphezu kweqiniso lokuthi ngezinye izikhathi liboniswa ngokwehlukana, noma kunjalo, lihlangene ukuthi lihlanganisa ukuthula kwenhlalakahle kanye nokuthula okungokomoya. Kunombono wokuthi bahloselwe ngokuqondile kulabo asebevele bethola ingcebo nengcebo, ngenkathi besaba ukuthi bangaba nezimfanelo ezinjenge-mercantilism, ukuhaha, ukuhaha.
Uma sicabanga ngalezi zithombe kungekho emunye nomunye, kodwa ngokwehlukana, sizozitshela ukuthi i-Ebisu ayifuni nje inhlanhla nenjabulo, kodwa futhi iyisibonakaliso sokuhweba, yingakho ethandwa kakhulu ngabantu abahlanganyela enkambeni ehlangene. Ngaphezu kwakho konke, i-Ebisu nayo ibangele ekukhetheni umlingani noma umlingani wakho wokuphila kwakungalungile, ngoba uyisimangaliso sokuvumelana. U-Ebisu, osendlini, uzovikela izakhamizi zakhe ekudaleni nasekukhonzeni abanye.
Incazelo yobuNkulunkulu Ebisu
Njengomthetho, i-Ebisu iboniswe igqoke lesikhwama esikhulu ngaphandle kwezinsimu, kufana ne-kolpak. Ngakolunye uhlangothi, ngokuvamile uphethe induku yokudoba, kwenye - inhlanzi enkulu yemilingo emele impumelelo nengokomoya. Ngokuvamile ubizwa ngokuthi inkulumo eyaziwayo eye yahlala iphiko, indlela yokubamba injabulo ngezandla zakho.
I-Hoditsmenie eyinkimbinkimbi-Ebisu isisithulu nje, kodwa inomusa futhi iyathokozela, ngaphandle kwesizathu wanikezwa isiteketiso - unkulunkulu ohlekayo.
Umgomo we-ebisu mascot
Ebisuyschaetsya unkulunkulu wokuzikhandla, hhayi okungelutho, ngaphezu kwakho konke, usiza labo abasebenza ngokuthembeka ngomsebenzi wabo siqu. Abalimi bahlonipha kakhulu u-Ebisu-uyasiza ukutshala izitshalo nokuvikela izitshalo ezivela kuzo zonke izinhlekelele zemvelo, njengomlambo nezikhukhula. Ngokuvamile i-Ebisu iboniswa njengengcweti, inkosikazi emsebenzini wayo. Isitshalo esibonisa i-Ebisu yi-bamboo.
Ukuze i-talisman isebenze, i-Ebisu idinga ukuthi ibekwe eduze kwamanzi, isibonelo, imithombo yamanzi, umthombo wokuhlobisa noma enye indawo "emanzi".
I-Daikoku (i-Daikokuten) ingunkulunkulu wokuchuma nomcebo ku-Feng Shui, omunye wabonkulunkulu abangu-7 benjabulo. Ngokuvamile kubhekwa njengesivikeli sekhaya, ukuvikela indlu nokuyivikela kunoma yikuphi amandla angalungile. Ngakho-ke, i-Daikoku ingumphathiswa wezindlu nomgcini wezingcebo.
I-ordinion iboniswe nge-toree-eboshi cap, ephethe i-suit carigun, ngesandla esingcwele sesando, nangesikhwama nesilwane, ngenxa yokuthi kubonakala kalula futhi akuyona nje izimpawu ezesabekayo esithombeni sayo, kodwa futhi kuhlanganisa nokuningi. Ngaphakathi esikhwameni, i-Daikoku ibamba ingcebo Nedar kukhona umbono wokuthi i-rat ingabonakala kuphela endlini egcwele ukudla nokuchuma, lapho kungayikuzwa isidingo sokudla.
I-Daikoku ibonisa udansa, futhi phakathi nalomdanso uyakhonsa i-sweatshop yakhe engcwele, evezwa njengendlela yokuthokoza kwenhlalakahle nenhlalakahle yendlu lapho ekhona khona.
Ukushaqeka okukodwa nge-beater kubonisa izibusiso ezintsha, injabulo nokuchuma hhayi kuphela indlu lapho itholakala khona, kodwa nakwezwe lonke!
Ngokusho komlando owodwa mayelana ne-Daikoku, isikhwama sakhe sigcwele irayisi lomlingo, futhi ngokushesha nje uma isilwane sidonsa ngalesi sikhwama, irayisi iyofafaza esandleni sakho.
Omunye umlando uthi uma amaDaikoku emidlalweni, ngokushaya kwakhe konke okuphambene nepakethe ayidli ilayisi kuphela, kodwa futhi nemali yemali, kanye namatshe ayigugu, lokho kuncike ngokufanele kulokho okudingayo. Konke lokho kuthululwa kubonga esikhwameni sokubamba izinja ngaphakathi ngaphakathi, okugubha izimbobo, lapho yonke ingcebo ihamba khona ngqo entendeni yesandla sakho.
Kunomlando owodwa owatshela indlela umlingo owasiza ngayo i-Daikoku futhi wasiza ukubaleka ekuphindisekeni konkulunkulu abathukuthele lapho enecala lokunganaki. Kwaba ngemva kwalokhu ukuthi isilwane sihlangene ekubambisaneni ne-Daikoku futhi yi-satellite yayo enkulu. Okuyinhloko ye-Daikoku inhle ngamazwi ahlanganiswe esikhwameni sakhe: Yenza ubuhle bamakha amafutha akho, khona-ke inhlanhla nengcebo iyodlula ezandleni zakho, futhi uzojabulela kuphela futhi udle izithelo.
Isimiso se-Daikoku engumculi
I-Daikokunachinach ukusebenza uma ephathwa ngothando nangenhlonipho. Ngenxa yalokhu, mphathe ngendlela efanele, umdumise ngomdanso wakhe womlingo. Lobuhlobo noNkulunkulu ngeke bushiywe kubo bungaqapheli futhi buzobonakaliswa ngomsebenzi wawo, okuthembisa ukuthi ukukhangwa kwenjabulo, ukuchuma kanye nokucebisa impahla ekhaya.
Ngokubambisana, i-Ebisu ne-Daikoku yizisebenzi zokuhweba nezokusebenza, ekhaya ziyizivikeli zokuthula kanye nenhlalakahle ekhaya. Kunombono wokuthi i-Daikokui Ebisu ingumphathi webhizinisi elincane, ikakhulukazi amabhizinisi amancane namafemu. Ngokuphathelene komunye nomunye baqokwa njengothisha futhi bafundela, ubaba nendodana.
Ukwengezwa kulaba abalingiswa ababili kuvamise uFukurodzin - unkulunkulu wenhlanhla. Ngokuvamile, zakhiwa abathathu ndawonye, ​​zihlangene ngendoda eyodwa.
U-Soyuz Daikoku no-Ebisu ngeke bakuthwale kuphela umsebenzi wokucebisa kwakho, kodwa futhi bazise ukungabi nalutho okuza nengcebo. Ngezinye izikhathi, le nyunyana ifakwa enye i-goddess, i-Showsin, ekhuthaza ukwanda kwamandla omlingo futhi yenza umsizi usebenze kakhulu ekuheha ukuchuma nokuvumelana kwenhlanhla.
Njengoba i-Daikoku ne-Ebisu, ngaphezu kokuletha impumelelo, inhlanhla kanye nengcebo, isalokhu ivikela ikhaya elivela emandleni amabi, njalo livela emithonjeni yangaphandle, ingcono ibekwe phambi komnyango wendawo yokuhlala. Kungcono ukubeka ama-etimalism emkhakheni osempumalanga wendawo yokuhlala - endaweni yomndeni kanye nempilo naseningizimu-ntshonalanga - endaweni yengcebo. Ngokuvamile zonke lezi zibalo, ezihlala emakhaya akho, zingashintsha kakhulu impilo yakho ibe ngcono. Kubhekwa njengombono omuhle kakhulu ukuwabonisa njengesipho ngezifiso zonke izinhlobo zempumelelo.
Ubuhle bonyaka omusha ngezandla zabo siqu: kanjani ukwenza umuthi wezinhlamvu
Yini eyenziwe ngezandla?
Imisebenzi yezandla zezingane ezenziwe ngama-acorns esihlokweni esithi "I-autumn": ama-master amakilasi ngezithombe ezinyathelo ngezinyathelo
Indlela yokugqoka isigqoko sebhebhe?
Indlela yokubopha ihhashi lomntwana
Isaladi "Ukufaneleka" nekhukhamba nezinqathe
Indlela yokuba yinkosikazi ngesonto
Isihlahla semali sizoletha impumelelo
Isaladi sesitshalo seqanda esitayela saseKorea
Ngiyakwazi ukugeza lapho ngikhulelwe?
Indlela yokuhlela igumbi labantwana lomfana?
Uhambo lokuhamba ngamaholide omnyaka omusha
Endocervicitis yomlomo wesibeletho: kuyini? Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
I-Brutal Potato Ukukhangisa nguDmitry Nagiyev, ividiyo
Izinkinga kanye nezingxabano zobuntwana
Indlela yokuxazulula ingxabano ngaphandle kokuxabana
Indlela yokubiza umfana ukuba uphumelele futhi ujabule